Sida loo xulo xamuul xamuul sax ah-News & Dhacdooyinka-Farxada Gaadiidka (Changzhou) Ebike Co., LTD
Sida loo xulo baaskiil xamuul midig
Waqtiga: 2021-03-23 Hits: 20
Baaskiilada laguma yaqaan inay xambaaraan waxyaabo culus, laakiin mootooyinka xamuulka ayaa qaadaya Haddii aad rabto inaad carruurtaada ka kaxeyso Point A ilaa Point B, laakiin aadan ku dhejin karin baaskiilkaaga caadiga ah, waxaa jira fursado badan oo kaa caawin kara. Si alaabada looga kala qaado hal meel ilaa meel kale, runtii waa wax mudan in laga fiirsado baaskiil xamuul.
Waxaa jira dhowr nooc oo xamuul ah. Guud ahaan, waxaa jira dabada-dheer, saddex-baaskiil, noocyo kale oo saddex-baaskiillo leh, iyo "minivan." Dhammaantood waxay leeyihiin suuqyo kala duwan waxayna ku kala duwan yihiin qiimaha. Baaskiilo badan ayaa hadda lagu qalabeyn karaa ikhtiyaar caawimaad koronto oo aad noqon doontid fududahay in loo raaco dukaamaysigaaga toddobaadlaha ah.
Waxa kale oo laga yaabaa inay caqli gal tahay in la doorto hal nooc, oo ay ku jiraan dhammaan gawaarida waxtarka u leh ee runta shaqeynaya: jir gadaal ah, feer, sanduuqa silsiladda, shiraac, iyo wixii la mid ah. Gaarigaaga ayaa kugu adkaan doona, sidaa darteed dooro qeyb tayo wanaagsan leh. iyo bareegyada waa in si wanaagsan looga ilaaliyaa arrimahan, iyo qaabka hoose ayaa ka dhigaya fuulaadda iyo ka degitaanka markabku markii la raro.
Laakiin marka hore, waxaad u baahan tahay inaad go'aamiso waxa aad sidato: cunug aad u yar? Carruurta yar yar? Carruurta waayeelka ah? Qof kale oo qaangaar ah? Ama xamuulka? Alaab noocee ah? Marka, intee in le'eg ayuu safarkaagu qaadanayaa? Waqtiga ugu muhiimsani? Miyaad dooneysaa inaad xawaaraha iyo dhaqaajinta ku hayso, mise waxaad rabtaa saddex-baaskiil leh awood dheeri ah waxyar gaabis ah
Aad ayey muhiim u tahay inaad ka fikirto halka aad dhigeyso oo aad fikrad fiican ka heshid miisaaniyadaada ugu badnaan oo aad xasuusnaato inaad tixgeliso kharashka kaabayaasha sida sariirta, kuraasta carruurta iyo qufulo tayo sare leh.
Talada ugu fiican ayaa ah inaad tijaabiso dhowr nooc, eeg sida ay adiga adiga kuu yihiin, oo arag inta awood ee ay dhab ahaan leeyihiin. Hubso xaddidaadaha miisaanka, oo ay ku jiraan rakaabka iyo gaadiidka, iyo rarka .Haddii aad leedahay saaxiib ama deris kuu leh mid, taasi waa ku habboon: Tijaabi tooda oo weydii khibradooda. Waxaad raadisaa waxyaabo noloshaada kuu fududeynaya, sida jaranjaro hooseeya, qaansooyin isku dhafan, iyo qalab si fiican loo qaabeeyey oo ku habboon baahiyahaaga.
Waxaad ogaan doontaa in nooc kasta oo aad doorato, ay noloshaada ka dhigeyso mid hagaagsan.
KA HOR: Waa maxay sababta loo doorto mootada xamuulka ee korantada OTKARGO
XIGASHO: Aaminaad-Asal-naxariis leh